१८ वर्षीय युवक ग’र्भवती, यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दु’खदायी पि:डा ! | Rochak
April 17, 2021 NepstokLeaveaComment on १८ वर्षीय युवक ग’र्भवती, यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दु’खदायी पि:डा !
आमा बन्नु हरेक महिलाका लागि सबैभन्दा विशेष पल हुन्छ । किनकी उनको शरीरभित्र उनको आफ्नै अंशको रुपमा नयाँ मान्छे बढिरहेको हुन्छ । तर के तपाईंले कहिल्यै कुनै पुरुषले समेत यस्तै मातृत्वको अनुभूति गर्न पाएको देख्नुभएको छ ? सायद छैन होला । किनकी पुरुषहरु आमा बन्न सक्दैनन् तर अमेरिकामा चाहिँ एउटा अनौठो मामिला सार्वजनिक भएको छ । *** यो समाचार को भिडीयो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
एकजना १८ वर्षीय अमेरिकी युवक गर्भवती भएका छन् । अहिले उनको कोखमा ४ महिनाको भ्रूण हुर्किरहेको छ । ती युवकको ग’र्भ रहेको तस्वीर पछिल्लो समय सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । उनको नाम मिकी च्यानेल हो । उनी अमेरिकाको बोस्टन सहरमा बस्छन् । उनी पुरुष हुन् तर उनको शरीरमा प्रजनन प्रणालीचाहिँ महिलाको छ । सोही कारण उनले गर्भाधारण गरेका हुन् ।*** यो समाचार को भिडीयो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
मिकीको जन्म पुरुषकै रुपमा भएको थियो । उनकी आमाको ग’र्भको जाँच गर्दा ग’र्भमा छोरी रहेको डाक्टरहरुले बताएका थिए । तर जब छोराको रुपमा मिकी जन्मिए, डाक्टरसमेत अचम्ममा परे । उनको शरीरमा पुरुषकै यौ’नां’ग थिए । तर उनको शरीरभित्र चाहिँ महिलाको जस्तै पाठेघर, अण्डासय लगायतका अंग रहेछन् । यसलाई चिकित्सा भाषामा ‘प’र्सिस्टेन्ट एमलेरिएन डक्ट सिन्ड्रोम’ अर्थात् पि’एम’डिएस भनिन्छ । *** यो समाचार को भिडीयो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **